လစာ တိုးပေးသလို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူသူများ အရေးယူဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော www.rfa.org | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လစာ တိုးပေးသလို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူသူများ အရေးယူဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော www.rfa.org
လစာ တိုးပေးသလို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူသူများ အရေးယူဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော www.rfa.org
Posted by သားငယ် on Feb 11, 2012 in News | 12 comments
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဝန်ထမ်းတွေကို လစာနဲ့ အခြားအခွင့်အရေးတွေ အလျင်အမြန် တိုးပေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားခဲ့တာကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားပြီး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့လည်း လိုအပ်ကြောင်း ဝေဖန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။“ဒီလို ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို နားထောင်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်။ လုံလုံလောက်လောက် လခပေးရမယ်ဆိုတာ၊ ဒါတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအရ မလုပ်ဘဲနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို တိတိကျကျ ဥပဒေအရ အရေးယူရမယ်။ နောက် တတိယ တစ်ခုကတော့ ဒီဟာတွေကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အရလည်း ပြန်ပြင်ဖို့ လိုတယ်” အာအက်ဖ်အေက ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်အတွက် မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ရက်က သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလို မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ပုသိမ် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ လာရောက် ကြိုဆိုနိုင်ခြင်း မရှိအောင် အဲဒီနေ့မှာ နည်းပြ စာမေးပွဲတွေ စစ်ဆေးခဲ့ပြီိး စာမေးပွဲ မဖြေသူတွေကို နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ပိတ်ပင်မယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မိမိတို့ အန်အယ်လ်ဒီက တိုင်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာအက်ဖ်အေကို ပြောဆိုပါတယ်။ “ကောလိပ်မှာလည်း ဒီစာမေးပွဲမဖြေရင် ဖိုင်နယ်မဖြေရဘူး စသည်ဖြင့် လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီးတော့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တင်ပြထားပါတယ်”
အရေးအကြီးဆုံး အချက်လို့ ထင်ပါတယ် ဗျာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူစနစ်ကို အဓိက ထားပြီး တိုက်ဖျက်မှ
ဖြစ်မှာပါ သူ က အဓိက တရားခံဖြစ်နေတာပါ လာဘ်ပိုပေးတဲ့ သူကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးတယ် အဲ့ဒီက
နေစတာပါဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတွေ ၀န်ထမ်းတွေ နောက်ဆုံး ကျောင်းသင်ခန်းထဲ ထိတောင် ဆရာမကို
ကန်တော့ နိုင်မှ စာမေးပွဲအောင်မယ် ဆို တဲ့ အဆင့်ထိ ကျယ်ပြန့် နေလို့ အဓိက ထားပြီးတိုက်ဖျက်သင့်ပါ
အကျင့်ပျက်ချစား ခေါက်ရိုးကျိုးနေတာက ဋ္ဌာနတိုင်းမှာ…
ကိုယ့်လူကို ကိုယ် အရင်ရှင်းရမှာ …
လခတိုးပေးတာ မင်္ဂလာတပါးပါ … လက်ဖြန့်တောင်းစားနေတဲ့ ကယ်ပါ အနွယ်ဝင်
တွေ ကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ တော့ စောင့်ကြည့်နေရမှာ …။
အခုကိစ္စက “လာဘ်ပိုပေးတဲ့ သူကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးတယ်”ဆိုတာထက်တောင်ပိုနေတယ်။သာမန်ကိစ္စနဲ့လဲမပေးရင်မလုပ်တော့ဘူးလက်ဖက်ရည်ဖိုးဆိုပြီးနံမည်တပ်တောင်းတော့တာဘဲ။
Corruption is the worst matter at the democracy country. All must equal to do the action.
သ/မ တို့ကုန်သွယ်လယ်ယာ တို့ စားဖျော်တို့ စတဲ့ဌာနမျိုးတွေပါ….
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲ..
တခြားဌာန၀န်ထမ်းတွေ အပါအ၀င် ခုဆိုရင် ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေလဲ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ပျက်ပြားနေကြတာတော်တော်များများတွေ့နေရပါတယ်၊ ငါ့ကျူရှင်မတတ်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ဆိုတာတွေက အစ ကြားနေမြင်နေရတော့ တော်တော်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်..
တချို့ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်က နယ်စပ်ကို အလှည့်ကျသွားကြတဲ့
အရာထမ်းတွေများဆို တခေါက်ဆိုဆိုသလောက် ရာကျော်ပြန်ပါလာတတ်သတဲ့
လူသိမှာစိုးလို့ အိမ်မှာတော့ ဘာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းမှ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် မထားရဲ တဲ့အဖြစ်များ
ကလေးများရဲ့အနာဂတ် ပညာရေးကိုအလေးမထားပဲ ငွေရလိုမှုနဲ့ပိုက်ဆံနောက်လိုက်နေကြတဲ့
CDMA 450Mz မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ Compny တွေကိုမပေးခင် ဌာနက ချထားပေးတုန်းကလဲ
လက်မှတ်ထိုးကြေး၊ နံပါတ်အပူးကြေးနဲ့ ထောသွားသူများ ရှိသေးတယ်
ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် ပါပဲ
မပြောချင်ဘူး မပြောချင်ဘူး ပြောကိုမပြောချင်ဘူး.. ဟွန့်
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတယ် အစိုးရ ပစ္စည်းတယ် ဆိုတာမှာအမျိူးမျိူးရှိပါတယ်။အိမ်မှာစားစရာမရှိ အစိုးရပိုင်
ကိုခိုးတယ်။လာဘ်ယူတယ်။အိမ်ကသားသမီးကို စက်ဘီးလေး ၀ယ်ပေးချင်လို့ အနွေးထည်းလေးဝယ်ပေး
ချင်လို့ ခိုးတယ်၊လာဘ်ယူတယ်။ဒီအထိတော့ မဆိုးသေးဘူး။လက်ခံမယ်ဆို လက်ခံလို့ ရတယ်။ဒါပေမဲ့ အိမ်ကမိန်းမ စိန်နားကပ် အသစ်ဝယ်ချင်လို့ ၊အိမ်ကသားကို စင်ကပူကျောင်းထားဖို့၊
ရွှေတောာင်ကြားမှာ မြေကွက်ဖို့ အစိုးရပိုင်ကို ခိုးတယ် အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်။အခုလာဘ်ပေးလာဘ်ယူတာကိုတိုက်ဖျက်မဲ့လူတွေ(အစိုးရအဖွဲ့)ကတချိန်ကဘယ်လိုလူမျိူးတွေပါလဲ။
လစာတိုး ပြီးရင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေ ပပျောက် ပါပြီ ။
ခြင်းပေး ခြင်းယူပဲ လုပ်ကြမှာပါ။
တိုးရင်လဲ ထိထိရောက်ရောက်တိုးသင့်တယ် ထင်ပါတယ် သိပ်မကြာ သေးပါဘူး တိုးထားတာ နှစ်သောင်း တဲ့ ခုလဲ ဘယ်လို လာ ဦးမလဲ မသိဘူး အနည်းဆုံး တော့ စားလောက် အောင်လေး တော့ တိုးမှ ဖြစ်မယ် လာဘ် မစား တဲ့သူ တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ လုပ်နေသူ တွေ ကျ တော့ လစာ လေးတခုပဲ အားကိုးနေရတာ ပါ အိမ်(ဇာတိမြေ) မပြန်နိုင် ကြတာ လည်း ကြာပါပြီ နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်တော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဗျာ